Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warineysaa seddex dhimasho oo kale oo la xiriirta COVI | KWIT
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warineysaa seddex dhimasho oo kale oo la xiriirta COVI
By Halima Osman • Jan 4, 2021
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warineysaa seddex dhimasho oo kale oo la xiriirta COVID-19 oo ku nool Gobolka Woodbury Isniintii, illaa 171 tan iyo bilowgii cudurka faafa.
Toddobaad gudihiis, Iowa waxay ku dartay 247 dhimasho iyo in ka badan 10,000 oo kiisas cusub oo coronavirus ah.
Degmada Woodbury, waxaa ka jiray 17 kiis oo dheeri ah oo maanta la diiwaangaliyay iyo heerka tijaabada 14-maalmood oo ah 15.5%. Taasi waa boqolkiiba laba boqolkiiba toddobaad ka hor.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu soo saaray warbixin isbedel toddobaadle ah oo muujisay waxoogaa koror ah boqolkiiba imtixaannada togan ee usbuuca dhammaaday 27-kii Diseembar. Warbixinta ayaa sheegtay horumarkii hore ee heerarka infekshanka ay u badan tahay inay ka dhasheen isu imaatinno yar yar iyo dadka wejiga duubtay. Si kastaba ha noqotee, xilliyada ciidaha shaqsiyaadka waxaa laga yaabaa inaysan ku dadaalin inay raacaan tilmaamaha.
(South Dakota waxay diiwaan galisay in kabadan 2,000 oo kiis oo cusub hal usbuuc gudahood iyo 67 dhimasho dheeraad ah.
Nebraska, waxaa ka jiray in ka badan 7,000 kiis oo cusub toddobaad gudihiis, iyo 113 dhimasho dheeraad ah. Saraakiisha caafimaadka ee Degmada Dakota waxay ku dareen laba dhimasho oo kale tan iyo wixii ka dambeeyay cusbooneysiintii Sannadka Cusub. Waxaa jiray 23 kiisas dheeri ah oo la soo sheegay maanta.)
Xeer ilaaliyaha guud ee Iowa wuxuu ka digayaa khiyaanooyinka dhici kara maadaama dadku bilaabayaan helitaanka hubinta kicintooda.
Guddiga Ganacsiga ee Federaalka wuxuu leeyahay dowladdu kuma soo wici doonto, qoraal uma soo diri doonto, kumana soo xiriiri doonto warbaahinta bulshada si ay u weydiiso Lambarka Bulshada, koontada bangiga ama nambarka kaararka deynta.
Waxaa intaa dheer, ma heli kartid lacagtaada si dhakhso leh iyada oo loo marayo dhinacyada saddexaad.
Lacagta waxay ku imaan doontaa deebaaji toos ah, jeeg warqad ah ama kaarka deynta ee Bixinta Saameynta Dhaqaalaha.
Dhaqaaluhu wuxuu ku sii socdaa inuu soo hagaago sagaal gobol oo Midwest iyo Plains ah oo ay ku jiraan Siouxland. Hase yeeshe, hoggaamiyeyaasha ganacsigu rajo yar kama qabaan ka dib markii ay soo kordheen kiisaska coronavirus ee gobolka, sida lagu sheegay sahan cusub oo bille ah oo la sii daayo Isniinta.
Tirada dhimashada ee Woqooyi-galbeed Iowa ee loo aaneeyay COVID-19 ayaa sare u kacday 13 shalay, sar
By Halima Osman • Dec 30, 2020
Tirada dhimashada ee Woqooyi-galbeed Iowa ee loo aaneeyay COVID-19 ayaa sare u kacday 13 shalay, saraakiisha caafimaadka bulshada ayaa ku dhawaaqay.
13-ka qof ee cusub ee dhimatay waxay ka yimaadeen toddobo degmo deegaan. Ma jiraan wax dhimasho dheeraad ah oo laga soo sheegay Waqooyiga-bari Nebraska ama Koonfur-bari South Dakota illaa shalay galab.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo warisay 67 dhimasho dheeraad ah oo la xiriirta COVID-
By Halima Osman • Dec 29, 2020
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo warisay 67 dhimasho dheeraad ah oo la xiriirta COVID-19 Talaadadii iyo ku dhowaad 1,500 kiis oo cusub oo ku saabsan coronavirus-ka cusub 24-saac gudahood.
Shaqaalaha ayaa bilaabay inay dadka ku tallaalaan guryaha xanaanada ee Iowa, iyagoo keenaya rajo ah in qoysaska ay dhowaan booqan doonaan dadka go'doominta ah, in kasta oo ay qaadan karto toddobaadyo in lagu dhammaystiro hawsha tallaalka.